08 / 07 / 2021 08 / 07 / 2021 ခရစ် Wharfe 346 Views စာ0မှတ်ချက် 910001 သစ်တောအတွင်းရှိရဲတိုက်, 910007 BIONICLE ဒဏ္endsာရီ, 910010 မဟာငါးဖမ်းလှေ, 910016 ရဲအရာရှိရဲ့ Safe, ၉၁၀၀၁၇ Kakapo, 910025 P ကိုarticle အရှိန်မြှင့်စက်, ပျံသန်းမှု၏ 910028 လိုက်စား, ဘိုင်အို, BIONICLE ဒဏ္endsာရီများ, အုတ်ခဲ, BrickLink ဒီဇိုင်နာအစီအစဉ်, ပေမယ့, ဒံယလေကဗန် Zonneveld, Jason Allemann, Lego, Lego ဝါသနာရှင်မီဒီယာ, Marvin ပန်းခြံ, Particle အရှိန်မြှင့်စက်, အဆိုပါ LEGO Group
အဆိုပါ Lego BrickLink Designer Program တွင်အစုလိုက်စုစည်းထားသောအစုလိုက်စုစုပေါင်းသည်မိတ္တူ ၅၀၀၀ သာအကန့်အသတ်ရှိကြောင်း Group မှရှင်းပြသည်။
ri ၏ငြင်းပယ်၏ပထမအကျော့ဘို့ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့်အခါ Lego Ideas ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကစီမံကိန်း ၄ ခုရှိသည် ရောင်းကုန်ပြီ ၂၄ နာရီအတွင်း။ တကယ်တော့ Daniel Van Zonneveld's 910001 သစ်တောအတွင်းရှိရဲတိုက် ထရိုက်ယူခဲ့သည် တစ်နာရီအတွင်း - ချို့ယွင်းမှုကြောင့်ပရိတ်သတ်များကိုအမိန့်ပေးသည် နှစ်ကြိမ်ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသော capacity.
ယခု BrickLink နှင့် Lego ကြိုတင်အမှာစာ ၅၀၀၀ ကိုသာအဘယ်ကြောင့်ရွေးချယ်ရကြောင်းကို Group မှကြေငြာခဲ့သည်။
"အစုံတစ်ခုစီအတွက်ယူနစ် ၅၀၀၀ ကန့်သတ်ချက်ကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ AFOL Designer Program ကိုအခြေခံထားတယ်" ဟုသူတို့ကရှင်းပြသည်။ မူရင်းအစီအစဉ် ပန်ကာဒီဇိုင်းများကိုတစ်ပိုင်းတစ်စတရားဝင်ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ရန် Lego ထိုနှစ်ကုန်ပိုင်းတွင်အုပ်စုသည် BrickLink ကိုဝယ်ယူခဲ့သည်။ ဒီလွှတ်ပေးမှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ ၂၅၀၀ အစုံအလင်ထုတ်လုပ်ခဲ့တယ်။
နှင့်ဖုန်းခေါ်နေစဉ် Lego ပန်ကာမီဒီယာ (အပါအဝင်) Brick FanaticsBrickLink ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Marvin Park ကထိုအဖွဲ့သည်ထို capa ကိုနှစ်ဆတိုးရန်ယုံကြည်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်city BrickLink ဒီဇိုင်နာအစီအစဉ်အတွက်ပရိသတ်များထံမှဝယ်လိုအားကိုဖြည့်ဆည်းရန်လုံလောက်သည်။
“ [AFOL ဒီဇိုင်နာအစီအစဉ်အတွက်] လူကြိုက်များတဲ့ရန်ပုံငွေကဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀ လောက်အများကြီးနိမ့်ကျပေမယ့်စီမံကိန်းအချို့ကတော့ဒီရလဒ်နဲ့မကိုက်ညီပါဘူး” ဟုမာဗင်ကရှင်းပြသည်။ “ ကျနော်တို့ထုတ်ကုန် ၁၅ ခုအနက် ၁၃ ခုကိုရောင်းပြီးနှစ်ခုကမအောင်မြင်ခဲ့ဘူး။ ဒါကြောင့်ဒီအချက်ကိုအခြေခံပြီး ၀ ယ်လိုအားကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ပမာဏကိုနှစ်ဆတိုးဖို့စဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။
"အခုငါလုံးဝချွတ်ခဲ့ပြောနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့ကအခြားပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကိုဖော်ပြခဲ့တဲ့ဒီအချက်အလက်တွေက BrickLink ကအဓိကလုပ်ကိုင်တာဖြစ်လို့အဲဒါကိုမပေါင်းဘူး Lego Ideas။ "
Marvin ကစီမံကိန်းတစ်ခုချင်းစီတွင်ထောက်ခံသူ ၁၀၀၀၀ အထိရှိခဲ့ကြောင်းလည်းရှင်းပြခဲ့သည် Lego အုပ်စု၏လူစုလူဝေးအရင်းအမြစ်ရှာဖွေရေးပလက်ဖောင်း, တွန်းအားပေးလာသည့်အခါအရေအတွက်အတိအကျကိုကြိုတင်မှာယူရန်အတိအကျကိုသူတို့မမျှော်လင့်ခဲ့ကြပါ။ (Sokoda's ကဲ့သို့ဖြစ်သကဲ့သို့) 910007 BIONICLE ဒဏ္endsာရီ နှင့် Jason Allemann ရဲ့ 910025 P ကိုarticle အရှိန်မြှင့်စက်).
"Lego Ideas 10K ထောက်ခံသူ [တံခါးခုံ] ရှိပါတယ် "ဟုသူကဆက်ပြောသည်။ ကုန်ပစ္စည်းကိုသာပံ့ပိုးခြင်းရဲ့နိမ့်အဆင့်ကတိကဝတ်ကနေပုံမှန်ပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းကိုသင်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်၊ မင်းရဲ့ပိုက်ဆံတွေကိုတကယ်ထည့်ထားတာနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်အဲဒါကကျိုးကြောင်းဆီလျော်တဲ့ရွေးချယ်မှုပဲ။
ဒါပေမယ့် ၀ ယ်လိုအားကမျှော်လင့်ထားတာထက်အများကြီးပိုမြန်လာတာကိုငါတို့မမျှော်လင့်ခဲ့ဘူး။ ဒါကသေချာတာပေါ့၊ ဒါပေမယ့်ငါတို့လုပ်ငန်းစဉ်ကပစ္စည်းဘယ်လောက်များများလိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုပြတဲ့လက်ရှိဒေတာကိုအခြေခံပြီးထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်ရှိခဲ့တယ်။city ဒီအစီအစဉ်အတွက်ငါတို့လုံခြုံအောင်လုပ်နိုင်တယ်။ ”
ဒါကထုတ်လုပ်မှု capacity အခုလုပ်မယ် နောက်တဖန်နှစ်ဆ အနာဂတ်လူအုပ်ရန်ပုံငွေများအတွက် ၁၀,၀၀၀ မှ ၁,၀၀၀ အထိ၊ ပထမအကြိမ်တွင်အောင်မြင်သောအုပ်စုငါးခုအနက်မှလေးခုသည်သူတို့၏ထုတ်လုပ်မှုပြေးလမ်းများနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိသည်ကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။ အတွက်ကြိုတင်မှာယူမှုများ 910010 မဟာငါးဖမ်းလှေ, 910016 ရဲအရာရှိရဲ့ Safe, ၉၁၀၀၁၇ Kakapo နှင့် ပျံသန်းမှု၏ 910028 လိုက်စား သြဂုတ်လ3ရက်နေ့တွင်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်
910001 သစ်တောအတွင်းရှိရဲတိုက်, သို့သော်, အဖြစ်, နောက်တဖန်အမှာကြားရန်မရရှိနိုင်ပါ Lego Group နှင့် BrickLink ပြီးသား မတော်တဆရောင်းသည် ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကပထမအကြိမ်ပြိုင်ပွဲတွင်ဒန်နီယယ်ဗန်ဇွန်နီဗယ်လ်၏အုပ်ရေ ၁၀,၀၀၀ ။
ဒုတိယစျေးကွက်ကိုလည်းကတိပြုခဲ့သည် ၎င်း၏ဆာဗာ capa ပြန်လည်သုံးသပ်city အနာဂတ်ကျည်ဆံများအတွက်နှင့်အရေးယူဖို့ scalpers တားဆီး ပြန်လည်ရောင်းချခြင်းရည်ရွယ်ချက်များအတွက်မျိုးစုံအစုံဝယ်ယူထံမှ။
← Lego နှင့် BrickLink server ကို capa သုံးသပ်city အနာဂတ်ပေမယ့ပြေးများအတွက်
LEGO နှင့် BrickLink တို့သည်အနာဂတ်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသူများ၏အစီအစဉ်များအတွက်ပန်ကြားချက်ကိုငြင်းပယ်သည် →